Sida Uu Karan Johar U Burburiyay Nolosha Aktarada Caanka Ah Anushka Sharma - Arimaha Bulshada
Nin lagu bartay inuu u eexdo qoysaska magaca ku leh Bollywood ee Karan Johar ayaa mar walba ahaa mid taageero u muujiya caruurta ay dhaleen aktaradii hore ee caanka ahaa ee doonaya inay iyaguna magac ku sameysteen Bollywood.
Marnaba ma uusan jecleyn dadka ka yimid banaanka ee aan qoyskooda taariikh ku laheyd Bollywood, wuxuuna ahaa mid had iyo jeer si xun u la dhaqma aktarada aan xigto ku laheyn Bollywood.
Anushka Sharma oo haatan ka mid ah atariishooyinka ugu caansan India ayaa mar wajahday dhaqanka foosha xun ee Karan Johar. Filim sameeyahaan ayaa si u la kac ah isagu dayay inuu burburiyo shaqadeeda madaama aysan ka dhalinin qoys magac ku leh Bollywood-ka.
Wuxuu isku dayay inuu ku ciyaaro shaqadeeda, laakiin sidee ayuu isagu dayay inuu u burburiyo shaqada Anushka Sharma.
Anushka Sharma waxay waayaheeda Bollywood ka bilowday filimka Rab Ne Bana Di Jodi oo ay la keentay Shah Rukh Khan. Laakiin Karan Johar ayaa si weyn isagu dayay inaysan gabadhaan helin doorka filimkaas. Karan waxa uu mar walba doonayay in filimka ay keento gabar ka mid ah qoysaska Bollywood si loo buunbuuniyo filimka.
Aditya Chopra oo ahaa soo saaraha filimkaas wuxuu saaxiib fiican la yahay Karan Johar, wuxuuna ku wargeliyay Karan Johar inuu filimka u xushay inay hogaamiyo Anushka. Ka hor filimkaan Anushka waxay isku dayday dhow filimaan laakiin madaama aysan u dhalan qoys Bollywood caan ka ah waa la soo diiday.
Markii ay ugu danbeyn heshay wixii ay ku hamineysay, Karan Johar ayaa isku dayay inuu si xasidnimo ah uga horjoogsado. Filimsameeyaha waxa uu u sheegay saaxiibkiis Aditya Chopra in Anushka aysan ku habooneyn inay filimka la keento Shah Rukh Khan, wuxuu u sheegay in Anushka aysan qurux badneyn.
Karan Johar wuxuu u sheegay Aditya in dadka aysan jeclaan doonin Anushka islamarkaana filimka uu noqon doono mid guuldareysta. Markii Aditya Chopra ay ka dhaadhici weysay soo jeedinta Karan Johan, wuxuu Karan u sheegay Chopra inuu waalan yahay haddii uu shaqaaleysiiyo Anushka.
Karan Johan shir jaara’id ayuu ku qirtay inuusan jecleyn sawirada Anushka. Wuxuu aaminaa inay tahay gabar aan qurxooneyn oo aan laheyn wax soo jiidasho ah. Wuxuu qirtay inuu isku dayay inuu horjoogsado riyadeeda Bollywood.
Karan wuxuu shaqsi ahaantiisa qirtay inuu isku dayay inuu qaarjiyo waayaha Bollywood ee Anushka Sharma. Wuxuu xitaa u sheegay asxaabtiisa kalee e filimaanta sameeya inaysan shaqaaleysiinin Anushka, waana sababta aysan Anushka u helin filimaan fiican bilowgii waayaheeda Bollywood.
Markii danbe qaabka aktarnimo iyo wacdaraheeda ayaa keentay inay qabsato Bollywood iyadoo loo dhiibay filimaan waa weyn. Karan Johar ayaa xitaa qirtay inuusan jecleyn filimka Rab Ne Bana Di Jodi sababtoo ah Anushka Sharma ayaa ku jirta.
Inkastoo uu Karan Johar raaligeliyay Anushka Sharma markii danbe islamarkaana uu u dhiibay filimkiisa Ae Dil Hai Mushkil, hadana dhaawacii uu u geystay ma ahan mid la ilaawi karo.